Statistics na Otu Ndị Njem Na-eji Social Media Tupu, N'oge, na Mgbe Ezumike | Martech Zone
Statistics na Otu Ndị Njem Na-eji Social Media Na-aga n'ihu, N'oge, na Mgbe Ezumike
Thursday, June 14, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ndị ahịa na-ejiwanye usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na smartphones mgbe ha na-achọ mmụọ nsọ, ma ha na-etinye ngwaọrụ ndị a n'oge nhazi na ntinye akwụkwọ. Yabụ, kedu ihe ndị na-ere ahịa njem ga-amata ma ọ bụrụ na ndị ezumike na usoro mgbasa ozi ha na-elekọta mmadụ?
Ọfọn, 30% nke ndị njem nọ na United States na-atụgharị ugbu a na mgbasa ozi mmekọrịta iji chọta mmụọ nsọ njem na njem a kpọtụrụ aha na mgbasa ozi mmekọrịta karịa Justin Bieber, Katy Perry, na Tayler Swift jikọtara! Nke ahụ pụtara na ebe ezumike ga-abụ ndị na-eme ihe ike karịa n'ịrụpụta ụlọ na ịchọta ndị nwere mmetụta ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịdọta ọtụtụ ndị mmadụ na njem ha.
Mobile na-arụ ọrụ dị mkpa, yana 42% nke ndị na-azụ ahịa na-achọ mmụọ nsọ njem na 40% n'ezie na-ede akwụkwọ site na mkpanaka
Ebe njem na Bureaus Bureaus nwere ike rụọ ọrụ iji wulite obi ụtọ maka ndị njem nwere ezumike ezumike akpọchiri. Inye ha ebe na ozi ga-eme ka ezumike dị mma… nke ha ga-achọ ịkọrọ ndị enyi, ezinụlọ, na ọha na eze n'ịntanetị.
Nnukwu wifi dịkwa mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmekọrịta! 74% nke ndị njem na-eji mgbasa ozi mmekọrịta, 85% jiri mkpanaka iji de akwụkwọ, na 60% na-eji ngwa nchọgharị eme njem
Mgbe ha laghachiri, ọ bụ oge ịbanye ọkwa na nyocha ndị ahụ! Jide n'aka na ị rịọrọ maka ndị njem hụrụ gị n'anya.
Na MDG Mgbasa ozi sụgharịrị emelitere naanị, Igha ezumike na Mediazọ Mgbasa Ọha, ndị na-agụ ga-amụta ụzọ dị iche iche nke mgbasa ozi na ekwentị mkpanaaka na-emetụta àgwà njem ndị ahịa na otu ha nwere ike isi nweta ihe ịga nke ọma na ndị njem na - eji ngwa ngwa.
Kedu ihe bụ usoro kachasị dị irè iji dozie atụmatụ uto B2B dị irè?